Mbola mitohy mamely an’i Papouasie-Nouvelle-Guinée ny herisetra mifandraika amin’ny fiampangana famosaviana · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy zokiolona any amin’ireo faritany avo ny ankamaroan’ireo lasibatra
Voadika ny 08 Mey 2022 3:35 GMT
Ny mpiasa ao amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana an'ny Vehivavy ao Papouasie-Nouvelle-Guinée mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra mihatra amin'ny Vehivavy tamin'ny 25 Novambra 2015. Sary sy dikantsoratra avy amin'ny pejy Flickr Firenena Mikambana an'ny Vehivavy. (CC BY-NC-ND 2.0)
Any Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), tsy maintsy miatrika enta-mavesatra fanampiny amin'ny herisetra mifandraika amin'ny fiampangana famosaviana (SARV) ny vehivavy sasany efa tsy manan-jo. Na izany aza vao haingana teo, nanatontosa fifampidinihana momba ny volavolan-dalàna fiarovana natolotry ny Mpiaro ny Zon'Olombelona natao hanohanana ireo vondrona sy mpitarika vondrom-piarahamonina amin'ny fampitsaharana ity herisetra ity ny hetsika maneran-tany nataon'ny Firenena Mikambana tohanan'ny Vondrona Eoropeana.
Mbola marobe ny tranganà SARV any amin'ireo faritany avo any PNG na dia eo aza ny drafitr'asa nasionaly natao hamongorana ny heloka bevava. Vehivavy zokiolona eny amin'ny vondrom-piarahamonina mahantra ny ankamaroan'ireo lasibatry ny SARV izay nahazo tsiny noho ny fanaovana ody ratsy mahatonga aretina mistery na fahafatesan'ny fianakaviana iray. Nitombo ny raharaha SARV nandritra ny valan'aretina, izay taratry ny tsy fahampiam-baovao momba ny coronavirus.
Noresahan’ ireo mpanao lalàna PNG nandritra ny fivorian'ny Komity Parlemantera manokana tamin'ny volana Aogositra 2021 ny SARV. Mazava tsara amin'ny fanamelohana ny SARV ny tatitry ny komity:
Tsy azo ekena mihitsy ity karazana herisetra ity: tsy azo leferina ho anisan'ny kolontsainan'ny PNG izany fa kosa avy amin'ny tsy fifankahazoan-kevitra (ary indraindray fanodinkodinana fanahy iniana atao) amin'ny fomban-drazana sy ny fivavahana mba hanisy ratsy olona tsy manan-tsiny, indrindra ny vehivavy sy ny ankizy.
Matetika feno herisetra sy idiran'ny mahalahy na vavy ny SARV amelezana ny vehivavy, ahitana ireo fihetsika mahery vaika mikendry manokana ny mahavavy ny niharam-boina.
Niezaka ihany koa ny komity hamantatra ny isan'ny tranganà SARV raha nanamarika fa mety hitombo ny trangan-javatra satria maro ireo niharam-boina misalasala mametraka fitoriana amin'ireo fianakaviany:
Olona 388 eo ho eo no voampanga ho namosavy isan-taona any amin’ireo faritany 4 mitambatra. Ny ampahatelon'ireo dia nitarika herisetra ara-batana na fahasimbam-pananana. Amin'ireo voampanga ireo, 65 no maty, 86 naratra mafy ary 141 no tafavoaka velona, ny hafa niharan'ny fanafihana sy fanimbana goavana, toy ny nodorana, notapahana, nofatorana na noterena nalefa tany anaty rano. Amin'ny ankapobeny, tranga 93 no nahitana fampijaliana: 20 naharitra andro maromaro ary 10 naharitra herinandro na mihoatra. Nampiasa ity angona ity ny tatitra mba hanombanana ny isan'ny tranganà SARV mahery setra teo anelanelan'ny taona 2000 sy Jona 2020 ho 6000 mahery, ka niafara tamin'ny tombana ho 3000 no maty teo amin'ny firenena.
Manoratra ho an'ny bilaogy DevPolicy, nanasongadina ny fiantraikan'ny SARV teo amin'ireo olona tafavoaka velona, ​​indrindra ny vehivavy sy ny ankizy i Anton Lutz sy Miranda Forsyth:
Tamin'ny fandinihana nataonay tao anatin'ny 4 taona, nahita izahay fa ny 15%-n'ireo niharam-boina ihany no maty, ka namela olona feno holatra, naratra am-po, tsy nahazo fanohanana, ​​natahotra hitady onitra eny amin'ny fitsarana. Kanefa tsy manao izany izy ireo. Mifindra izy ireo. Miafina izy ireo. Mivezivezy avy any amin'ny trano azo antoka mankany amin'ny trano azo antoka izy ireo. Miandry izy ireo. Manantena fa tsy ho voatafika intsony.
Mbola voarakitra an-tsoratra ihany ny raharaha SARV na dia taorian'ny fanentanana nanerana ny firenena aza. Tamin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Janoary, nanery ny handraisana fepetra maika ny Post-Courier:
Mampandringa ny fiaraha-monina ve ny vono olona sy ny fampihorohoroana ka manome tsiny ny famosaviana isika ho fomba mora hivoahana sy tsy iraharahiana izany?
Efa noresahana teo aloha ity raharaha ity.
Tsy misy olona miova anefa satria misy aina nafoy na potika ary toa tsy misy miraharaha.
Ny vehivavy indrindra no lasibatra ka tsy maintsy misy ny olona mankahala lalina ny vehivavy.
Mety ho marary ao amin'ny lohany izy ireo.
Toa hita ihany koa fa miditra ao anatin’ilay antsoina hoe famonoan’olona amin’ny ody ratsy ny fifandrafian’ny foko ary valifaty ankolaka izany.
Fanta-daza ao amin'ny PNG ny famonoan'olona amin'ny valifaty ka nahoana isika no tsy mahalala izany?
Namerimberina ny fitakiana hamahan'ny governemanta tsara kokoa an'ity olana ara-tsosialy sarotra ity ny pretra Giorgio Licini ao amin'ny Fihaonamben'ny Eveka Katolika : “Hita ho tsy mitombina amin'ny ankapobeny ny fanehoan-kevitra nentim-paharazana momba ny famosaviana tany Eoropa taloha sy PNG ankehitriny , mifototra amin'ny ahiahy sy ny tahotra, ny fanasaziana sy ny valifaty, ny fanararaotana, ny lainga sy ny fandraharahana. Ratsy ny lalàna, tsy ampy, saika tsy misy manoloana raharaha tena sarotra. Ahitana famonoana olona saingy toa betsaka kokoa noho ny fitondran-tena heloka bevava mahazatra. “
Dominic Kanea, niangana tamin'ny SARV, nangataka sazy henjana kokoa ho an'ireo izay manao ny SARV:
Mila ireo solombavambahoaka avy any amin'ny faritra Ambony isika mba hiara-hiasa hanohitra ny herisetra mifandraika amin'ny fiampangana famosaviana.
Ampidiro ny sazy henjana kokoa ho an'ireo kanosa misambotra olona tsy manan-tsiny ary manao tsirambina manimba fananana mitentina kina [vola PNG] an-tapitrisany sy famonoana olona tsy manan-tsiny.
Dame Carol Kidu, mpiaro ny zon'ny vehivavy, manizingizina fa tranga vao haingana ny SARV ary mampitandrina ny amin'ny fampifandraisana azy amin'ny fomban-drazana na tantara PNG:
Tsy nisy asa soratra ara-pianara-mahaolona (antrôpôlôjia) nahitako firesahana zava-mampihoron-koditra toy izany. Tsy anisan'ny razamben'ny PNG izany satria fiarahamonina tia miahy kokoa isika. Tsy fantatro ny antony nipoiran'izany, satria fantatsika fa anisan'ny fiarahamonina PNG ny famosaviana, saingy tsy tanatin'ny fiarahamonina ny SARV. Ny famonoana olona amin'ny SARV dia vono olona niniana natao ary ampirisihin'ny namana sy havana.
Fiona Hukula ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Nasionaly PNG mampitandrina momba ny fomba mampirongatra ny tahotra valan'aretina ary mampitombo mihitsy ny tranga SARV:
…Misy atahorana ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny COVID-19 izay mety hiteraka krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy. Mety hisy herisetra koa izany, satria mitady hanome tsiny ny olona ary mitady fiarovana amin'ny fotoana tsy azo antoka amin'ny fanamelohana ny hafa.
Mila mihetsika haingana ny governemanta sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mba hisorohana ny fiparitahan'ny tahotra izay miteraka herisetra sy korontana ara-tsosialy.
Jereo ity lahatsary mikasika ny fomba ahafahan'ny volavolan-dalàna naroson'ny Mpiaro ny Zon'Olombelona ity hampiroborobo ny asan'ireo vehivavy mpitarika vondrom-piarahamonina amin'ny ady amin'ny SARV ao amin'ny PNG: